स्वर्णले बिर्साएको बमबारुदको विगत
“महिलालाई आत्मरक्षाको अभ्यास गराउनु जरुरी छ”
वैदिकलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सहमति जुटेन
सञ्जुले जितिन् भारोत्तोलनमा स्वर्ण,नेपालको स्वर्ण संख्या ३६
विद्युतीय सवारी साधनमा लाभजति व्यापारीलाई
उसुमा जुनी राईले जितिन् स्वर्ण, नेपालकाे अब स्वर्ण पदक संख्या ३५ पुग्याे
साग साइक्लिङमा नेपाललाई अर्को स्वर्ण
तेक्वान्दोमा भुपेनले जिते स्वर्ण
एक परदेशीको आत्मस्वीकारोक्ति
हिमालखबर शुक्रबार, असोज १३, २०७४
चार दशक लामो प्रवास बसाइले मलाई सबैथोक दियो। तर दशैं–तिहारमा घर बिर्सन सक्ने शक्ति भने कहिल्यै दिएन।
त्यही माटोबाट मैलेबाँच्न चाहिने बौद्धिक आधार, नैतिक बल पाएँ, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानका कुरा सिकें। नेपाली बुट्टामै रहेछ– मेरो जीवनको चूरो, जिउनुको मूल्य मान्यता– जसले मलाई यहाँसम्म डोर्‍यायो। त्यसैले होला घरसँग मेरो सधैंको अटुट सम्बन्ध छ। सबैलाई दशैंको शुभकामना!
घर कि कोठा पुनःनिर्माण ?
घर भनेको जग, गारो र छानोले बनेको बास बस्ने संरचना मात्र नभई संस्कार, संस्कृति, इतिहास र सम्पदा पनि हो। घरका नाममा भूकम्प प्रतिरोधी दुइटा कोठा मात्र बनाउँदा हाम्रो निर्माण संस्कृति–सभ्यता सिद्धिन्छ।
आँगन के आदमी, मकान के मनई
चन्द्रकिशोर बुधबार, असोज ११, २०७४
'मकान' सँगै पक्की घर र शहर पलायन बढेपछि मधेशका गाउँभित्रै गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
घरको बनोट यस्तो हुन्थ्यो जहाँ भँगेराले सहज बास पाउन सकोस्। दलानमा परेवाले ओत लिन सकोस्। आफू जे जस्तो खाए पनि 'कौर' कुकुरलाई खुवाउने गरिन्थ्यो।
यसको भाव आफू मात्र होइन, वरिपरिका चराचुरुङ्गी र जनावर पनि पालिनुपर्छ भन्ने लाग्दथ्यो। आँगनमा तुलसीको मठ घरको हिस्सा मानिन्थ्यो। र, त्यस्ता घरमा घनश्याम अर्थात् भगवानको बास हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो।
केदार शर्मा बुधबार, असोज ११, २०७४
कनकमणि दीक्षित बुधबार, असोज ४, २०७४
कनकमणि दीक्षित सोमबार, भदौ २६, २०७४
कनकमणि दीक्षित आइतबार, भदौ १८, २०७४
भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रम शेरबहादुर देउवालाई नेपालको जीर्ण राज्य संयन्त्रले साथ नदिएको देखियो ।
ब्ल्याक होलको रहस्य
हिमालखबर शुक्रबार, भदौ १६, २०७४
वैज्ञानिकहरुले बुधबार पहिलोपटक ‘ब्ल्याक होल’को तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् । आखिर के हो त ब्ल्याक होल ? डेढवर्ष अघि ‘हिमाल खबरपत्रिका’मा प्रकाशित डा.प्रज्ज्वल काफ्लेले लेख ।
नेपालमण्डलको 'सबाल्टर्न' मुटु
कनकमणि दीक्षित विहीबार, भदौ १५, २०७४
काष्ठमण्डप कुनै राजारजौटा अथवा भगवानको थलो होइन, आदिकालदेखि नै यो आमजनताको आफ्नो थियो । यसै कारण 'गणतन्त्र नेपाल' ले त यस सत्तलको महत्व झनै बुझ्नुपर्ने थियो ।
आफैमाथि पहिरो खसेपछि...
मुकेश पोखरेल शनिबार, भदौ १०, २०७४
‘ढुङ्गा खस्दै छ, गाडी छिटो अघि बढाउनुस्,’ छेउकै सिटका यात्री अत्तालिएर भन्दै थिए । एक्कासी गड्याङ्गगुडुङ्ग आवाज आयो, झ्यालका सिसा फुटे, बसको पछिल्लो भाग हिलो र ढुङ्गाले भरियो । म सहित पछिल्लो सीटका तीन जना यात्री घाइते भयौं, शरीरभरी लेदो पोतियो । हामी चढेको बसमाथि पहिरो खसेछ ।
कनकमणि दीक्षित मंगलबार, भदौ ६, २०७४
रामेछापको दोरम्बामा २०६० मा सेनाद्वारा भएको नरसंहारलाई माओवादी स्वयं बिर्सन चाहन्छ, किन?
शिशुहरूको जीवनको लागि आमाको दूधको न तोक्न सकिने कुनै मूल्य छ न त विकल्प ।
फ्लेक्सबाट उदाङ्गिएको लज्जा !
कनकमणि दीक्षित विहीबार, भदौ १, २०७४
एउटा तुलले पनि मुलुकको गरिमा बोकेको हुन्छ ।
कनकमणि दीक्षित सोमबार, साउन २३, २०७४
प्रकृतिको नियम, ओरालोमा पानी बग्छ र ध्यान पुर्‍याइएन भने खतरा निम्तिन्छ ।
जहाँ हिमाल धुमिल देखिन्छ
हिमालखबर आइतबार, साउन २२, २०७४
जति हिमाल चहकिला छन, तिनका काखमा रहेका बस्ती त्यति नै धुमिल रहेछन् । यहाँका बासिन्दा उचित स्वास्थ्योपचार र शिक्षाको अभावका कारण बसाइँ सर्नु पर्ने र अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
हिमालखबर शनिबार, साउन २१, २०७४
अझै पनि फिस्टुलाले नेपाली महिला सताइरहनु भनेको महिला मात्र होइन, सिंगो समाजकै लाज हो ।
कनकमणि दीक्षित सोमबार, साउन १६, २०७४
स्थानीय सरकारको निर्वाचनले स्थायित्वको जग बसाइदिएको छ भने यसलाई दिगो बनाउने काम प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनले गर्नेछ ।
निसन्तान महिलामध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतमा इन्डेमेट्रिओसिसको समस्या देखिन थालेको छ।
रुपा जोशी मंगलबार, साउन १०, २०७४
कनकमणि दीक्षित आइतबार, साउन ८, २०७४
'नेपाल खादलको वंशावली'
कनकमणि दीक्षित मंगलबार, साउन ३, २०७४
किम्बदन्ती अनुसार शुरूमा ठूलो ताल भएको ‘नेपाल मण्डल’ महाचीनबाट आएका बोधिसत्व मञ्जुश्रीले दक्षिण पर्ने कटुवाल दह क्षेत्रमा तरबार प्रहार गरेर पानी कटाइदिए । पानी नजमेपछि जंगल हुर्किएको उपत्यकामा मानव बसोबास शुरु हुन्छ । अन्ततोगत्वा दक्षिणएशियाकै उत्कृष्ट शहरी सभ्यता यहाँ हुर्किन्छ– मूर्तिकला, वास्तुकला र आध्यात्मिक उपलब्धिदेखि राज्य व्यवस्थासम्ममा उत्कृष्ट !
यस्तो गजबको उपत्यका हाम्रो पोल्टामा पर्‍यो, तर पूर्णतः प्राचीनता झल्कने यस उपत्यकाको संरक्षण भने हामीले गर्न सकेनौं ।
गर्भावस्थामा मुटु रोग
गर्भावस्थामा मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शरीरमा फ्याँक्नुपर्ने रगतको भार वहन गर्न नसक्दा मुटु फेल हुन पनि सक्छ।
बौद्ध खानपानको चियोचर्चा
वसन्त महर्जन शनिबार, असार ३१, २०७४
अहिंसावादी धर्म भनेपछि बौद्धहरूको खानपानमा चासो हुने नै भयो। कतिले त्यसका लागि चियोचर्चा गर्छन्। चियोचर्चा र त्यसपछिका टिप्पणीहरू चाहिं प्रायः बेतुकका हुन्छन्। बुद्ध र बौद्ध धर्मको आधारभूत मान्यताबारे जानकारी भए यसखालको समय कटनी शायदै हुनेथियो।
प्राणी हत्या नगरी मासु प्राप्त नहुने भएकोले मासु खानै हुँदैन, मासु खाएपछि मान्छे भ्रष्ट हुन्छ वा त्यस्तो मान्छे बौद्ध हुन सक्दैन भन्ने तर्क अतिवादी सोचबाट प्रभावित छ।
राष्ट्र ध्वजावाहकले मेटाइदिएको कौतुहल
कनकमणि दीक्षित शुक्रबार, असार ३०, २०७४
आक्रोशबाट अपनत्वको बाटोमा हिंडेको रहेछ राष्ट्र झण्डा ।
गोलमाल विश्वसम्पदा सूची
वसन्त महर्जन शनिबार, असार २४, २०७४
युनेस्कोले 'काठमाडौं उपत्यका' भनेको यसभित्रका सातवटा सम्पदास्थल मात्र हो। त्यस वरपरका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू युनेस्कोको चासोको विषय होइन ।
राष्ट्रगानको प्रस्तुतिमा बहुलता
कनकमणि दीक्षित मंगलबार, असार २०, २०७४
राष्ट्रगानलाई किन एउटै रिकर्डिङमा सीमित राख्ने र किन विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा उल्था गरेर नगाउने?
हिमालखबर सोमबार, असार १९, २०७४
नेपाली वन 'सरकारी भ्रम'
हिमालखबर शनिबार, असार १७, २०७४
सरकारी प्रतिवेदनमै नेपालको कुल वनमध्ये ०.१ प्रतिशत क्षेत्रफल ढाकेको भनिएको 'जुग्लान्स् वालिचियना' रुखको प्रजाति यहाँ मात्र होइन, संसारमै भेटिन्न ।
भ्यू टावरः पहाडको टुप्पोमा होइन रौतहटमा
कनकमणि दीक्षित सोमबार, असार १२, २०७४
गर्भकालमा नेगेटिभ रक्तसमूहको खतरा
गर्भवती महिलाको रक्तसमूह नेगेटिभ हुनु आफैंमा जोखिमको अवस्था हो ।
वसन्त महर्जन विहीबार, असार ८, २०७४
कनकमणि दीक्षित मंगलबार, असार ६, २०७४
के सम्बन्ध छ एउटा पन्छी प्राणी, एउटा उपकरण र एउटा टंगाल दरबार बीच?
स्मार्टफोनको घरघरमा बिगबिगी भइसक्दा पनि मैले भने एक वर्ष अघिसम्म फोनकल र मेसेजिङ गर्न मात्र 'डम्बफोन' नै प्रयोग गर्थें। मलाई स्मार्टफोन लिन प्रेरित गरे कुनै बेलाका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले।
मनिष झा सोमबार, जेठ २९, २०७४
प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ प्रयोग गर्न पाउँदासम्म हाम्रो सडक संस्कृति आजको भन्दा निकै परिष्कृत भइसक्नेछ ।
सडकमा झरेको चश्मा
रुपा जोशी आइतबार, जेठ २८, २०७४
सडक विस्तारले भएका फूटपाथ पनि मासिए, साँघुरिए। हिंड्ने बाटो बन्द गरेर सरकार उल्टै जनतासँग रु.२०० जरिवाना असुलिरहेको छ ।
जीवनप्रसाद राई शनिबार, जेठ २०, २०७४
ह्याप्पी बर्थडे रेडियो सगरमाथा !
कनकमणि दीक्षित आइतबार, जेठ ७, २०७४
रेडियो सगरमाथाले २० वर्ष काटेछ । उसलाई बधाई दिनुपर्छ दक्षिणएशियाको यो कुुनामा रेडियोलाई राज्यको बन्धनबाट फुकाइदिएकोमा ।
ज्या सःम्ह च्यः, खँ स:म्ह द‍्य:
वसन्त महर्जन शनिबार, जेठ ६, २०७४
खासमा शुक्रसागरलाई सोझो, घमण्डी भन्दाभन्दै नेपाली समाजले उनीबाट लिन सकिनेजति काम लिन सकेन । एकल लेखनका एक दर्जनजति पाण्डुलिपि छाडेर गएका उनी संयुक्त अनुसन्धान र लेखनमा पनि सक्रिय थिए । अब उनको त्यो विशाल ज्ञानसागरलाई कसरी एकीकृत गर्ने ?
भुमरीले खाएको जहाज
हिमालखबर शनिबार, वैशाख २३, २०७४
- रामप्रसाद रेग्मी
चार वर्षअघि अर्घाखाँचीको मसिनालेक डिहीडाँडामा भएको विमान दुर्घटना चालकको गल्तीबाट नभई 'लामो दूरीको गुरुत्वाकर्षणीय बतास' बाट भएको थियो, जुन वायुबारे नेपालीलाई थाहै थिएन।
भैरहवासँग सम्पर्क टुट्नुभन्दा करीब दुई मिनेट अघि जहाज अचानक बाक्लो बादलभित्र छिर्‍यो। ठीक यही बेला सह–चालक बञ्जाराले मुख्य चालकलाई जहाज तल नझार्न आग्रह गरिरहेका थिए। जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा केही सेकेण्ड मात्र अघि बञ्जाराले जोडले 'सर, नघुमाउनुस्' भनेका थिए। यो नै उनको अन्तिम वाक्य बन्यो।
पुरानो 'पिभट्', नयाँ 'पिभट्'
कनकमणि दीक्षित बुधबार, वैशाख २०, २०७४
पहिला पनि तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो, अब तिब्बत–चीनसँग।
वसन्त महर्जन शनिबार, वैशाख १६, २०७४
बुद्धको जीवनकालमै पतन भएको भन्दै प्राचीन कपिलवस्तुको अध्ययनमा पूर्णविराम लगाइदिनु इतिहासप्रतिको उपेक्षा ठहर्छ।
सिंजाका खस नरेश अशोक चल्लको समयमा खस साम्राज्य बोधगयासम्म पुगेको पुष्टि भएबाट लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि खस साम्राज्यका अधीनमा रहेको बुझिन्छ। सन् १३१२ मा अर्का खस राजा रिपु मल्लले लुम्बिनी र कपिलवस्तुको भ्रमण गरेको दुई वटा अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ। खस साम्राज्यको विघटनपछि पनि यहाँ सुव्यवस्थित जनजीवन रहेको यस क्षेत्रबाट प्राप्त अन्य ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सामग्रीको अध्ययनबाट भन्न सकिन्छ।
कनकमणि दीक्षित आइतबार, वैशाख १०, २०७४
कनकमणि दीक्षित आइतबार, वैशाख ३, २०७४
कनकमणि दीक्षित बुधबार, चैत ३०, २०७३
त्यो बेला, जब 'प्रगतिशील' भनेको कुनै समुदाय चिनाउने नाम होइन, विशेषण थियो।
प्रदेशमा हराउदैछ मौलिकता
हिमालखबर सोमबार, चैत २८, २०७३
सपनामा बरालिने कि पाइला चाल्ने ?
कनकमणि दीक्षित बुधबार, चैत २३, २०७३
आजको अन्योलग्रस्त राजनीतिक वातावरणलाई चिर्न नयाँ दलले मैदानमा उत्रँदा वर्तमानका महत्वपूर्ण मुद्दामा आफ्नो अडान अगाडि ल्याउनुपर्ने हो
पृथ्वीनारायणको एकता अभियानमा विभेदको हल्ला
ज्ञानमणि नेपाल आइतबार, चैत २०, २०७३
इतिहासकार हौं भन्ने नेपालीलाई नै विदेशीका लेखोट ब्रह्मवाक्यसरह लागेपछि कसको के लाग्छ र!
नेपाल सर भएपछि पृथ्वीनारायणले साधुको भेषमा राजनीति गर्ने धर्मध्वजी भनेर ६० जना जति क्रिश्चियन पादरीहरूलाई निकालिदिए, ती गएर बेतियामा बसे। तीमध्ये पादरी जिसेप्पीले पृथ्वीनारायण बर्बर शासक हुन्, सयौं कीर्तिपुरेका नाक काटिए भनेर बढाइचढाइँ लेखेर बेलायतबाट प्रकाशित हुने जर्नलमा छापे, जुन विश्वव्यापी भयो।
नगर्नु च्याकुलझ्याइँ !
कनकमणि दीक्षित सोमबार, चैत १४, २०७३
कनकमणि दीक्षित सोमबार, चैत ७, २०७३
अब एउटा राष्ट्रिय अभियानको खाँचो छ, जो विदेशीले सुझाउने भन्दा नेपाली मनस्थितिबाट उदाओस्, जसले स्थानीय तह संरचनाको सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा ढाल्ने काम गरोस् । निर्वाचनतर्फ उत्साहित हुँदाहुँदै त्यसपश्चात्को अभियान रच्न जरुरी छ, ओठमा मुस्कान र मनमा खुशीसहित ।
हिमालखबर शनिबार, चैत ५, २०७३
-श्रीओम श्रेष्ठ 'रोदन'
नेपाली साहित्यको दुर्लभ पुस्तक लघुकथाको रचनाविधान को प्रकाशन कमल दीक्षित नहुनुभएको भए सम्भव हुने थिएन।
शनिबार, चैत ५, २०७३
गर्भावस्थामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको समस्या, मिर्गौलाको खराबी, मूत्रनली संक्रमण, थाइरोइड ग्रन्थी गडबडी, छारेरोग, रक्तअल्पता, हेपाटाइटिस, यौन रोग, क्षयरोग, एचआईभी एड्स, संक्रामक तथा परजीवीजन्य रोग, दम, निमोनियालगायत समस्या चर्किन सक्छन्।
उदार पूँजीवादको आतंक
शंकर तिवारी शनिबार, चैत ५, २०७३
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय, बेलायतमा ब्रेक्जिट, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको लहर वर्तमान समयका असामान्य घटना हुन्। यी घटनाका उठानले रोमाञ्चित कम र आतंकित ज्यादा भएको वर्तमान विश्वले यसको सामूहिक बैठान कस्तो हुन्छ भनेर आकलन गर्न पनि डराउनुपर्ने भयावह परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।
भारतीय मूलका साहित्यकार एवं लेखक, समीक्षक पंकज मिश्रले एज अफ एंगर, अ हिस्ट्री अफ द प्रिजेन्ट पुस्तकमा यही जटिल वर्तमानको दुरुह इतिहास खोतल्ने कोशिश गरेका छन्।